Nyocha AliExpress zuru oke - isi ihe dị iche iche nke ikpo okwu dị n'ịntanetị dị elu
Ezụ ahịa AliExpress - PROS & CONS ị kwesịrị ịma n'ezie
Uwe ndi nwanyi
Ihe umuaka, umuaka na umuaka
Ọla & ese
Akpa & akpụkpọ ụkwụ
&Lọ & Ubi, arịa ụlọ
Omogbọala na moto
Ahụike & Mma, ntutu
N'ụbọchị ndị ahịa, a na - enwe ohere ịhọrọ ụzọ kachasị mma ịzụ ahịa dị ukwuu site na nnukwu ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Weebụsaịtị AliExpress na-anọ n'etiti ndị na-eduga n'ịntanetị azụmahịa nke netizens na-ahọrọ. Otu njiri mara nke ụlọ ahịa ntanetị China dị elu bụ ngwa ahịa dị oke ọnụ.
Dika nyocha AliExpress, ndi ahia n’uwa n’iile na achoro ebe ahia n’ebe a karie n’ihi ahia ahia nke ihe ha bu nke onu ahia karie onu ahia karie ka ngwa ahia ndi ozo si amara. Ọzọkwa, saịtị ahịa ndị China dị n'ọtụtụ asụsụ. AliExpress na Bekee na-enye ntụgharị mgbanwe maka ngalaba dịnụ ọ bụla.
Njirimara AliExpress maka ịzụ ahịa ngwa ngwa na uru
Ndi ulo oru Alibaba hiwere ngo a kariri afo iri-iteghete gara aga, o ka nwere otutu ndi ozo n'usoro ahia mba uwa. O kwesiri ileba anya na webụsaịtị nwere usoro ịdebanye aha dị mfe ma dịkwa ngwa yana ngwa enyi-enyi maka ịnyagharị nke ọma. Ndị ọrụ na-enwe ike ịmepụta akaụntụ ahụ n'ụzọ abụọ:
ịbanye ozi nkeonwe n'ụdị debanye aha;
ịbanye na enyemaka nke akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla (dịka Facebook, Google ma ọ bụ VK).
Gaa na Ali Express
Enyere usoro nke ihe ndekọ maka n'efu yana ịgụnye ozi ndị ọzọ na-ejupụta n'ụdị ntanetị pụrụ iche. Ọ dị mkpa igosipụta:
Ezigbo mbido (aha mbụ na aha ikpeazụ);
N'ịhọrọ ụdị mmasị ole na ole, onye ọrụ nwere ike ịmalite ịchọ ngwa ịzụta. Storelọ ahịa n'ịntanetị ga-edozi ihe ngwaahịa kachasị mma maka ịzụ ahịa dị mma n'ịntanetị. Ego na-adịgide adịgide na onyinye pụrụ iche ga-abụ mgbakwunye nke ndị ahịa. Peoplefọdụ ndị na-eche: ““zọ isi na China? Ọ dị nchebe? ” Tụ ngwaahịa ngwaahịa ahụ nwere ezi ọnụ, ọ ga - ekwe omume n'ụzọ abụọ:
Iji pịa bọtịnụ "Zụta Ugbu a" ma gaa na menu ịkwụ ụgwọ.
Tinye ngwongwo gi n’ime ugbo ahia ka ha ghara ibanye n’agha.
Ihe ịzụta n’aka AliExpress?
A na-egosi ngwongwo niile dị n’okwu edemede. Ọ dị mfe ịchọ nke achọrọ. Dabere na ọnụ ọgụgụ, ọtụtụ ndị ahịa na-ahọrọ ịzụta ihe teknụzụ, uwe na ihe ncheta na-akpa ọchị na AliExpress. A na-ahụkwa ụdị akara ama na USA na katalọgụ. Ma lebara anya na uwe ejiji nke ejiji ma ọ bụ nke eji eji ejiji eji ọnụ ala dị ala nwere ike ịchọta ya dị ọcha ma dị mfe.
Ọ dị mma ịmara na AliExpress ndị na-ere ahịa kachasị agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe. A na-enye isiokwu niile na-ekpo ọkụ ma na -ewepu ego n'elu isi nke ibe ahụ. Storelọ ahịa Internetntanetị nke ntanetị elu China dị mma maka ịzụ ahịa bara uru n'ịntanetị. Na echiche nke nnukwu ụdị ngwongwo, amụma ọnụahịa mara mma na usoro ịkwụ ụgwọ dị mma, mkpọtụ AliExpress na-aga n'ihu na-akwụsị nkwado a ma ama.